Nyi Mu Yar: March 2009
စင်ကာပူ မှ မြန်မာလက်ဖက်များ တင်သွင်းစားသုံးခွင့် တားမြစ်
at Tuesday, March 31, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar0comments
လက်ဖက် နှင့် အဝါရောင် ဆိုးဆေး တွေ ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပေါ့ဗျာ
မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန ရဲ့ကျေညာချက် ထွက်အပြီးမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ ရဲ့Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ကနေ မတ်လ ၃၀ ရက် ရက်စွဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှ တင်သွင်းတဲ့ လက်ဖက်နှင့် လက်ဖက်ခြောက် အမျိုး အစား ၂၀ ကို ဆိုးဆေးတွေ နဲ့ တွေ ့ရှိလို့တားမြစ်ပိတ်ပင် တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ကျေညာချက်မှာ မပါရှိတဲ့ ယုဇန လက်ဖက် အမျိုးအစား ၈ မျိုးတောင် ပါရှိနေတာကို အောက်ပါ အတိုင်းတွေ ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
30 March 2009: The Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) has detected the presence of Auramine O in 20 types of tea leaves imported from Myanmar. Auramine O isayellow dye used as an industrial colouring agent for coloring silk, cotton, paper and leather. It is not permitted to be used in food. All implicated products have been recalled and will be destroyed. All consignments of tea leaves from Myanmar will be subject to hold and test and will only be released for sale if test results show that they are free from Auramine O. Details of the recalled products can be found here.
AVA advises consumers who have bought the implicated products to discard the products and not to consume them.
Details of Tea Leaves Products from Myanmar
1) Ah Yee Taung Pickled Tea Leaves
2) Ah Yee Taung Pickled Tea Leaves (Normal)
3) Ah Yee Taung Pickled Tea Leaves (Red)
4) Ah Yee Taung Pickled Tea Leaves (Sour & Spicy)
5) M&N Pickled Tea Leaves (Extra Spicy)
6) M&N Pickled Tea Leaves (Spicy)
7) M&N Than Lwin Fwn Food Products Lon May Pickled Tea Leaves
8) M&N Than Lwin Fwn Food Products Pickled Tea Leaves
9) Shwe Toak Pickled Tea Leaves with Mixed Nut
10) Soe Win Gold Label Tea Leaves, 70 g (Best before date Jul-09)
11) U Ka Kar Green Tea Leaves
12) Yuzana Pickled Tea Leaves (Blue) - "Girl"
13) Yuzana Pickled Tea Leaves (Red) - "Boy"
14) Yuzana Pickled Tea Leaves (White) - "Girl"
15) Yuzana Pickled Tea Leaves with Mixed Peas
16) Yuzana Pickled Tea Leaves
17) Yuzana Pickled Tea Leaves (Sour & Spicy)
18) Yuzana Pickled Tea Leaves with Peas
19) Yuzana Plantation Pickled Tea Leaves
20) Zayan Pickled Tea Leaves (Hot & Spicy)
AVA ပင်မ စာမျက်နှာ
AVA မှ မြန်မာလက်ဖက် နှင့် ပတ်သက်တဲ့ ကျေညာချက် အသေးစိတ်
at Tuesday, March 31, 2009 Labels: Fiji , MM , Travel Posted by nyimuyar0comments
at Sunday, March 29, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar7comments
Farrer Park, မူစတာဖာ နားက (Naranjan) နရန်ဂျန် ဖုံးဆိုင် လို့ဆိုလိုက်ရင် သိကြတဲ့သူတွေ တော်တော်များမှာပါ။ စာရေးသူတို ့သွားတိုင်းလည်း မြန်မာတွေ တဦးထက်မနည်း တွေ ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
စလုံးက ဖုံးဆိုင် ခပ်သေးသေး အချို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ က ဖုံးဆိုင်အချို ့လည်း နရန်ဂျန် ကနေပြီး ဖောက်သည်ယူ ရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆိုင်က လက်ကိုင်ဖုန်း တွေ ။ အိမ်သုံးဖုန်းတွေ တင်မကပါဘူး အယ်စီဒီ တီဗီတွေ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာတွေ နဲ့ အခြား အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းတွေလည်း ရောင်းပါသေးတယ်။ အိုင်ပေါ့ တောင်ရောင်းတယ်ဗျာ။
ဗီဇ နဲ့ ဝါသနာအရ စာရေးသူက အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးကို သိချင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နရန်ဂျန် ကို မကြာမကြာ ရောက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မူစတာဖာ ကိုသွားတိုင်း အပန်းမကြီးလို့ဝင်ပြီး ဈေးတွေ ငေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွေ ရွှေတွေ တောင် များတာ သူတို့လူမျိုးတွေ (အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေ) ဆိုတာကတော့ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပေါ့။ သူတို ့နဲ့ အပြိုင်ဈေးကို တိုးဝှေ ့ကြည့်ရ၊ ဖုံးက ကင်မရာ နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့လေ။
နရန်ဂျန် ရဲ့ပစ္စည်းတွေက ဘယ်ကနေ ဘယ်လို တင်သွင်းလာလဲတော့ မသိပါဘူး။ သူတို့က အသစ်ဖြစ်ကြောင်းတော့ အာမခံပါတယ်။ ၀ရန်တီ တော့ မပေးပါဘူး။ Take your own risk ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်း ဆိုတာမျိုးကလည်း တနှစ်အတွင်းတော့ ပျက်ခဲတတ်ကြတာမျိုး၊ ပျက်ချင်ရင်လည်း အခုဝယ် အခုပျက်တဲ့ အမျိုးဆိုတော့။ ရင်းရဲတဲ့ သူတွေ အဖို့တော့ တန်တယ် သုံးပျော်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
အိုင်ပေါ့လို ဟာမျိုးကျတော့ အင်တာနေရှင်နယ် ၀ရန်တီပေးတာဆိုတော့ အွန်လိုင်း၀ရန်တီ လုပ်လို ့ရတော့ ပိုလို ့တောင် တန်ပါသေးတယ်။
စင်ကာပူ ရောက်ကာစ က နရန်ဂျန်ဆိုင် အကြောင်း သူများပြောလို ့သာ ကြားဖူးတာ မသွားတတ်ပါဘူး။ နောက်တော့ အင်တာနက်ကနေ ရှာပြီး စမ်းတဝါးဝါးသွားရတာပေါ့။
ခရမ်းရောင်လိုင်း က ဖာရာပါတ် ဘူတာရောက်ရင် ထွက်ပေါက် စီ (Exit C) ကနေထွက်ပါ။ Race Course လမ်းမကြီးပေါ်ကို ထွက်ရပါတယ်။ မြေအောက်ကနေ ထွက်လာတဲ့ မျက်နာမူရာအတိုင်း မီးပွိုင့်ကို လမ်းကူး ဆက်လျှောက်သွားရင် ၃ မိနစ်လောက်ဆို ရောက်ပါပြီ။ ဖုံးဆိုင် လေးဆိုင်လောက် တန်းစီနေပါတယ်။ နာရာဂျန် မိုဘိုင်း ဆိုပြီး လူတွေ အများဆုံး ဆိုင်ပါပဲ။
ဘူတာကနေ သွားရင် ဖုန်းဆိုင်တန်း ကို တွေ ့တွေ ့ချင်း ဒုတိယဆိုင်ပါ။ အခြားဆိုင်တွေမှာ လူမရှိသလောက်ပါပဲ။ တိုက်နံပါတ် ၁၅၄ ပါ။ သူနဲ့ ၂ဆိုင်ကျော်မှာလည်း နောက်ဆိုင်ခွဲရှိပါတယ် ၁၅၈ ပါ။ စင်ကာပူ မှာ ဈေးအပေါဆုံး နဲ့ ရောင်းနေတာဖြစ်လို့ဝန်ဆောင်မှုကို မျှော်လင့်လို ့မရပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးက GST ဖိုး ပေးစရာမလိုတဲ့ ဆိုင်တွေ ရဲ ့ထုံးစံအတိုင်း ငွေသားပဲ လက်ခံပါတယ်။ ဘောက်ချာလိုချင်ရင် လက်ရေးနဲ့ ရေးတဲ့ ဘောက်ချာရပါမယ်။ ဦးထုပ်ကြီးတွေ နဲ့ ပန်ချာပီ တွေက ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေလား တာဝန်ရှိသူတွေလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ပန်ချာပီကြီးတွေကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ (154 and 158, Race Course Road)
ဝယ်ချင်တဲ့ ဖုန်းကို အိမ်မှာကတည်းက ကြည့်ထားရပါမယ်။ လိုချင်တဲ့ ဖုန်းကို သူတို့ကပ်ထားတဲ့ ဆိုင်အဝင်က ဈေးနှုန်း စာရွက်မှာ ကြည့်။ ဈေးကြိုက်ရင် အထဲဝင် ပန်ချာပီ ကြီးကို ဖုန်းမော်ဒယ် နံပါတ်ပြော သူက ဖုန်းပြလိမ့်မယ်။ အပြင်ပန်း ကောင်းတယ် လိုချင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားမှန်တာနဲ့ သူက ပိုက်ဆံပေးပါတကျီကျီ တောင်းနေလိမ့်မယ်(လူကလည်း များတာကိုး အပြစ် မဆိုသာပါဘူး) ပိုက်ဆံပေးလိုက်ပြီး ဘောက်ချာလိုချင် တခါတည်းတောင်း။ ငွေပေးပြီးမှ ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့် ပြီး ကလိပေရော့ပဲ။ များသောအားဖြင့် သူတို့စမ်းပြီးသားတွေ မို့ကောင်းတတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဟမ်းဆက်အသစ်နဲ့ ပျော်ပေတော့ပဲ။
သူငယ်ချင်း တယောက်ဝယ်ထားတာ အဲ့ဒီဆိုင်ကပဲ ၃ နှစ်လောက်ရှိပြီ ကောင်းနေတုန်းပါပဲ၊ နောက်တယောက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ စတားဟပ်က ဝယ်တဲ့ ဖုန်းတွေတောင် ၁ နှစ်လောက်ဆို ဖောက်ချင်နေတာမဟုတ်လား။
စာရေးသူ ဝယ်ထားတဲ့ ဟမ်းဆက်လည်း တာဝန်ကျေနေဆဲပါပဲ။ ဟမ်းဆက် ဝယ်ဖို့အကြောင်းများ ဖန်လာမယ် ဆိုရင် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းတွေ ရဲ ့အချိန်မရွေးပျက်တတ်တဲ့ သဘောကို နှလုံးသွင်းပြီး ဝယ်သာဝယ်လိုက်ပါ တန်သွားမှာပါ။
စာရေးသူ အပင်ပန်းခံ ပြုစုထားတဲ့ excel ဖိုင် ကိုပါ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယပတ် နဲ့ အခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ ့ဈေးတွေပါ။ ဈေးနှုန်း များ ကြည့်ရန်အတွက် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
မြေပုံ လမ်းညွှွှန်ကြည့်ရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
တကယ်တန်တဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်တာမို့မသိသေးသူများ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့ ရင် တခါတခေါက်လောက် သွားငေးလိုက်ပါဦးလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
at Saturday, March 28, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar2comments
ညီမတယောက်က မေးတယ် လေယာဉ် လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ အေးဂျင့် ဖုံးနံပါတ်တွေ သိလားတဲ့
အဲ့ဒီတုန်းကတော့ တခုပဲ သိပါတယ်။ ညနေဘက် စီးတီးဟော သွားတော့ လိပ်စာကဒ်တွေ တောင်းပြီး နောင်အခါ ကိုယ်လိုတဲ့ အခါလည်း အသုံးဝင်အောင် မသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း သိရအောင် ရေးလိုက်ပါတယ်။
VEGA Trading, Travels & Tours
#03-49 ,Peninsula Plaza.Singapore 179098
website : www.vegatravelbangkok.com
email : vegasingapore@singnet.com.sg
SIN-Myanmar Travel Pte Ltd.
Ma Zar Zar
#03-55, Peninsula Plaza,Singapore 179098
email : sinburma@singnet.com.sg
Mahar Travels and Tours
#04-40, Peninsula Plaza, Singapore 179098
email : mahar1@singnet.com.sg
နောက်တခုက လာလည်မယ့်သူတွေကို ပီအာ ခေါ်စာ အွန်လိုင်း အီး-ဗီဇာ လျှောက်ပေး လုပ်ပေးတဲ့ ဆိုင်ပါ၊ စင်း ၇၀ ဆိုရင် စလုံးကို အလည်လာဖို ့ဗီဇာလုပ်ပေးပါတယ်။ အလည်လာမယ့်သူ ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ပေးလိုက်ရုံပါပဲ၊ နောက်၂ ရက်လောက်ဆို အီး-ဗီဇာ ရပါပြီ။
Yadanar Travel Pte Ltd (TA0963)
Tel: 63349368, 63349369
for visa: visa@yadanartravel.com
at Thursday, March 26, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar0comments
at Saturday, March 21, 2009 Labels: General , MM , MyPet Posted by nyimuyar4comments
at Saturday, March 21, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar6comments
at Saturday, March 14, 2009 Labels: General , MM , Singapore Posted by nyimuyar 1 comments
at Friday, March 13, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar5comments
လက်ဖက်နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများ သိရှိရန် သတိပေးကြေညာချက်
မတ်လ ၂၀၀၉ ၁၂ ရက်် နေ ့ထုတ် ကြေးမုံ နှင့် မြန်မာအလင်း သတင်းစာ စာမျက်နှာ ၈ ပါ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ သတိပေးကြေညာချက်တဲ့၊ ဘယ် လက်ဖက်တွေ စားကြရမတုုံး။ ကိုယ်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးဆေးတွေ စားပြီးထားကြပြီလဲ။
၄၃ မျိုးဆိုတော့ ကုန်သလောက်ပါပဲ။ တကယ် ဘေးဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဆိုးဆေးတွေ မပါမှ စားသုံးရန်သင့်သော ဆိုပြီး ကြေညာမှာလား။
( အကြီးချဲ့ ကြည့်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
၂၀၀၉ ခု မတ်လ ၁၂ ရက်နေ ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (ဖတ်ရန် - ဖိုင်အရွယ်အစား ၃.၅၄ အမ်ဘီ)
၂၀၀၉ ခု မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ (ဖတ်ရန် - ဖိုင်အရွယ်အစား ၃၀ အမ်ဘီ)
သတင်းစာ ၂ စောင် စလုံး၏ စာမျက်နှာ ၈ တွင် ကြေညာချက်ပါသည်။
at Tuesday, March 10, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar 10 comments
at Monday, March 09, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar2comments
ဒီကနေ့ငယ်ငယ်တုန်းက အဒေါ်အကြီးဆုံး အိမ်မှာညတိုင်း ဖွင့်တဲ့ တောင်တန်း သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမသာရ ရဲ့ရေဆူပရိတ် ကို တရားနာချင်စိတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဆီမှာ လည်းမရှိတာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မှာ သွားရှာတာ တော်တော်နဲ့ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးကျမှ ထိပ်ဆုံးက လင့်ခ်မှာသွားတွေ ့တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့် ဘလော့မှာ လင့်ခ်လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ မသိသေးသူမှာ သိပြီးသူများ တရားနာချင်သူများ လွယ်လင့်တကူ သွားရောက်နာယူနိုင်ကြပါတယ်။
ကျေးဇူးအထူးကြီးပါတယ် ဓမ္မဒေါင်းလုပ် ဆိုဒ်က တရားအလှူ လှူသူများ ခင်ဗျား။
ဦးဥတ္တမသာရ - ပရိတိကြီး(၁၁)သုတ်၊ ရေဆူပရိတ်၊ ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ၊ ကမ္မဝါ direct link
မြန်မာဘာသာဖြင့် ဟောကြားထားသော တရားတော်များ
at Sunday, March 01, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar4comments
မနေ ့က အတူနေ ညီငယ်တယောက် က အိမ်မှာ ပုဇွန်ထုပ်ဟင်း ချက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ပုဇွန်ထုပ်ဟင်း ချက်စားချင်စိတ် အလွန်အမင်း ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဈေးနဲနဲ ကြီးတဲ့ ပုစွန်ထုပ် ဟင်းချက်ဖြစ်သွားတယ်။
စလုံးရောက်ပြီးမှ ဒီတခါလောက်ကြီးတဲ့ ပုဇွန်တွေ မချက်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ၄ ကောင်ကို ၉ ဒေါ်လာ စွန်းစွန်းပေးရတယ်။ ခါတိုင်း နဲနဲအကောင်ကြီးတဲ့ ပုဇွန်တောင်မှ ၁၅ ကောင်လောက်ကို ၄ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ပေးရတာ။ အခု ၄ ကောင်ထဲကို ၉ ဒေါ်လာဆိုတော့ နှမြောစရာကြီးပေါ့။ စားချင်လွန်းလို့သာ ချက်ဖြစ်တာပါ။
လင်မယား နှစ်ယောက် ပုဇွန် လေးကောင် ကို ညမနက်စားကြတယ်ပေါ့။ စားနေရင်း နဲ့ ဆရာ မင်းလူရဲ့ပုစွန်ထုပ် ၃ ကောင်နဲ့ အဖွားကြီးတွေ အကြောင်း ၀တ ုတို အကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ ရီမိကြသေးတယ်။ တော်သေးတာက ဒီနေ ့အိမ်ကို ဧည့်သည်မလာလို ့လေ။
ပုဇွန်ဟင်း နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် မုန်လာဥ ချဉ်ရည် ကိုလည်း သက်ထားက ချက်ပေးသေးတယ်။ အမှတ်တရ ပုဇွန်ထုပ် ဟင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထား လိုက်ပါတယ်။ လမ်းကြုံတုန်းလေး ဝင်စားသွားပါဦးလား။